ချောကလက်ယိုစာ (ယိုကိတ်မုန့်များအတွက်) - Frosting နှင့်အေးခဲခြင်း
လူအများကငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုမေးတယ် ချောကလက်ယို သူတို့ရဲ့ယိုကိတ်မုန့်သည်။ ငါပုံမှန်သုံးတယ် ရေ ganache အဖြူရောင်ချောကလက်နှင့်အစားအစာအရောင်နှင့်ငါ့ drips သည်။ ၎င်းသည်အရောင်ခြယ်မှုအချို့ကိုပြုလုပ်ပေးသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ကောင်းမွန်သော decadent ချောကလက်ယိုခြင်းကိုလိုချင်သည်။
ယိုကိတ်မုန့်အသစ်ကအဝတ်အချည်းစည်းကိတ်မုန့်ဖြစ်ဟန်နှင့်အခုအချိန်မှာအလွန်လမ်းကြောင်းသစ်မှာနေကြသည်။ သင်တစ် ဦး ယိုကိတ်မုန့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးလျှင်သင်ပြီးပြည့်စုံယိုရယူခြင်းစိတ်ရှုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းကိုချောချောမောမောပြီးချောကလက်ယိုယွင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးမယ်။
သငျသညျယိုကိတ်မုန့်လုပ်ဘယ်တော့မှပါတယ်လျှင်, စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါဟာမှာအားလုံးအလွန်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ငါမကြာခဏငါ့အသတိထားမိ ကိတ်မုန့် newbs ကိတ်မုန့်အလှဆင်အုပ်စုတစ်စု လူတွေကသူတို့ရဲ့ယို၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်အတူအများဆုံးပြproblemsနာများရှိသည်သော။ သိပ်အထူသို့မဟုတ်အရမ်းပါးလွှာဖြစ်စေ။
အရမ်းပါးလွန်းတဲ့ချောကလက်ယို အလွန်အကျွံအရည်ပါရှိသည် သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် အရမ်းပူတယ်
ဒါကြောင့်ဒီပြproblemsနာနှစ်ခုထဲကို ၀ င်ပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ချောကလက်ယိုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
လူကြိုက်အများဆုံးယိုအမျိုးအစားကိုချောကလက်နှင့်လေးလံသောမုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချောကလက်ကိုအရည်ပျော်စေရန်နှင့်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်ယိုရန်ကြိုးစားလျှင်၎င်းသည်အလွန်ထူထပ်ပြီးအနားများကချောမွေ့မည်မဟုတ်ချေ။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်ချောကလက်ကြောင့်သူ့ဟာသူအလွန်အရည်ပျော်မှုမရှိသောကြောင့်ကိတ်မုန့်တစ်လုံးထိမှန်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ခိုင်မာလာသည်။
ချောကလက်သည်အရည်ပျော်ရန်အတွက်အရည်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ အသုံးအများဆုံးအရည်ပုံစံသည်မိုးသည်းထန်စွာသောမုန့်ဖြစ်သည်။ မုန့်ဟင်းခါးကိုချောကလက်နဲ့ရောလိုက်ရင် ganache လို့ခေါ်တယ်။ Ganache ဟာလှပတဲ့ယိုစီးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပြီးအရည်ဖြစ်ဖို့မလုံလောက်ပေမယ့်သင်ခုတ်လိုက်တဲ့အခါနူးညံ့နေတုန်းပဲ။
ဒီမှာချောကလက်ဖြောင့်မယ့်အစား ganache ယိုအတူကိတ်မုန့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sharp ကရဲ့သကြားလုံး ဓါတ်ပုံများအတွက်!
သင်အသုံးပြုသောချောကလက်ပေါ် မူတည်၍ သင်ထည့်လိုက်သောမုန့်ပမာဏကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကအရမ်းအရေးကြီးတယ် ချောကလက်အမှောင်လေလေ၊ သင်သည်သင်၏ချောကလက်ကိုဘယ်ကရသနည်း။ ၎င်းသည်ချစ်ပ်များ၊ အရည်ပျော်များသို့မဟုတ်ဘားတစ်ခုမှဖြစ်နိုင်သည်။ ငါပိုပြီးလွယ်ကူသောအရည်ပျော်သောကြောင့်, mini ကိုချောကလက်ချစ်ပ်အသုံးပြုသော။
6 အောင်စမှောင်မိုက်သောချောကလက်သို့မဟုတ် Semi-ချိုသောချောကလက်
ဒီအချိုးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ ganache ယိုမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကျွန်ုပ်လွယ်ကူသောချောကလက်ကိတ်မုန့်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးပြုသည် ငှက်ပျောကွဲကိတ်မုန့် ။ ချောကလက်ကအရမ်းတောက်ပနေတယ်။
ဒီအချိုးဟာမုန့်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြူရောင်ချောကလက်ကမှောင်မိုက်တဲ့ချောကလက်တွေထက်ပိုနူးညံ့တယ် အဖြူရောင်ချောကလက်ဖြူကိုအရောင်ချယ်သည့်ဂျယ်တစ်ချောင်းကို ganache တွင်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်အလွယ်တကူအရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။ ganache အတွက်အထူးအစားအစာအရောင်သုံးဖို့မလိုပါဘူး။
သင့်တွင်မည်သည့်လေးလံသောခရင်မ်မဆိုရှိပါကကျွန်ုပ်ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါသည် ရေ ganache ယို ကျနော့်အမြင်တွင်အကောင်းဆုံးအဖြူရောင်ချောကလက်ယိုစေသည်။
ကောင်းပြီဒါဆိုမင်းရဲ့ချောကလက်တွေရှိတယ်၊ ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထည့်မယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။ အခုငါတို့ ganache ယိုစေကြကုန်အံ့။ ငါတို့ကနည်းနည်းလေးသေးတဲ့မုန့်နဲ့ချောကလက်ကိုသုံးတာကြောင့်ငါကမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကိုသုံးချင်ပေမဲ့သင်ကြိုက်ရင်နောက်ဟင်းနဲ့မီးဖိုကိုသုံးနိုင်တယ်။
ငါ့မုန့်ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင် ၁ မိနစ်ခန့်အပူပေးသည်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေနွေးငွေ့အချို့ကိုမမြင်နိုင်သည်အထိ။ တူညီသောအရာမီးဖိုပေါ်အပူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မပြုတ်ပါနဲ့! ဤသည်ကသင်၏မုန့်ကိုအလွန်ပူစေပြီးသင်၏ ganache ကိုအနှေးဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထို့နောက်ငါနွေးထွေးရန်ငါ့ချောကလက်ကို ၁ မိနစ်ခန့် microwave ။ ငါသည်ဤအချက်မှာချောကလက်အရည်ပျော်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ပါဘူး။
ထို့နောက်ပူနွေးသောချောကလက်ကိုပူပြင်းစေပြီး 2-3 မိနစ်ခန့်ထိုင်ပါစေ။
နှစ်ခုအတူတူ whisk ။ အရည်ပျော်မွေ့သောဖုများရှိပါကစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးချောမွေ့သည်အထိပြန်ခုတ်ပါ
ရောနှောခြင်းမကျော်ပါနှင့်သို့မဟုတ်သင် ganache သို့လေထုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်အခုငါတို့ ganache ကိုလုပ်ပြီဒါပေမယ့်ငါတို့အတော်လေးသေးယိုအဆင်သင့်မနေပါ! မင်းကိတ်မုန့်ထဲကိုပူပြင်းတဲ့ ganache ကိုသွင်းလိုက်ရင်မင်းရဲ့ယိုဟာကိတ်မုန့်ရဲ့အောက်ဆုံးအထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
သေချာအောင်လုပ်ပါ ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်မိနစ် ၂၀ ကြာအေးစေသည် သင့်ရဲ့ယိုလျှောက်ထားမီ။ အေးခဲသောကိတ်မုန့်သည်ချောကလက်ကိုချောချောမောမောဖြစ်စေပြီး၎င်းကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှအစက်မကျစေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
သင့်ရဲ့ချောကလက် ganache အေးမြပါစေ ဒါကြောင့်ပဲခံစားရသည်အထိ အနိုင်နိုင်နွေး ထိရန် ပူလို့မခံစားရသင့်ဘူး
ကိတ်မုန့်ကိုချောကလက်တစ်ခွက်သောက်သုံးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ သင်ပလတ်စတစ်ပုလင်း (သို့) ဇွန်းတစ်ခုကိုပင်ပိုက်အိတ် (ငါ့အကြိုက်ဆုံး) ကိုသုံးနိုင်သည်။ tool တစ်ခုစီသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောပုံစံကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ကပိုက်အိတ်အလွန်ပါးလွှာယိုထုတ်လုပ်သည်။ ဇွန်းတစ်ချောင်းသည် ပို၍ သဘာဝကျသောပုံရှိသည်။ တစ်ခုခုကိုအဆင်ပြေတယ်!
သင့်ရဲ့ယိုစီးမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်သင်၏ကိတ်မုန့်ထိပ်ကိုချောမွေ့စေရန်သင်၌ offset spatula သို့မဟုတ်ဇွန်းတစ်ခုရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါပိုက်တွေအတွက်ပိုက်အိတ်တစ်လုံးလိုချင်တယ်။ ပိုက်လိုင်းအိတ်ကိုခွက်တစ်ခုထဲထည့်ပြီးချောကလက်ကိုအလွယ်တကူဖြည့်နိုင်အောင်ခွက်ကိုအပေါ်အစွန်းဘက်ကိုခေါက်လိုက်တယ်။ ထိုအခါငါအစွန်အဖျားကိုချွတ် snip ။ ငါကြီးတွေယိုမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့မဟုတ်ပါဘူး
စမ်းသပ်မှုယိုလုပ်ပါ။ သေးငယ်သောပမာဏကိုသင်၏ကိတ်မုန့်အနားစွန်းတွင်တင်ပြီးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်မှန်ကန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သလား၊ ပါးလွန်း။ ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်ပြားနေလျှင်သင်၏ ganache သည်အလွန်ပူလွန်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလွန်ပါးနိုင်သည်။
ganache အလွန်ထူသည်နှင့်လုံးဝမယိုပါဘူးဆိုရင်, သူကအရောင်လွန်းသို့မဟုတ်အလုံအလောက်ပါးလွှာမဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကနေတ ဦး တည်းမကောင်းတဲ့ယိုဖယ်ရှားခြင်း, တပြင်လုံးကိုအရာဖုံးလွှမ်း, ကမှားရဲ့သဘောပေါက်အပေါင်းတို့နှင့်ထပ်မံစတင်ရန်အများကြီးပိုလွယ်ကူသည်။
ပြီးပြည့်စုံသောယိုစေရန်ငါကြီးမားသောယိုကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ပိုက်အိတ်ကိုညင်ညင်သာသာညှစ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်ညှပ်ခြင်းကိုရပ်လိုက်ပြီးကုန်းပေါ်မှမတင်ဘဲကျွန်ုပ်၏ပိုက်အိတ်ကိုရွှေ့လိုက်သည်။ ဒါကချောကလက်ကျော်ဆွဲငင်။ ထိုအခါသင်သည်သေးငယ်ယိုဖန်တီးရန်အနည်းငယ်လျော့နည်းညှစ်နိုင်ပါတယ်။ အစားအစက်ယိုစိမ့်ပုံကိုဖန်တီးရန်ညှစ်အားကြီးစွာဖြင့်ညှစ်။ အနည်းငယ်ဆက်ထားပါ။
သင်သည်သင်၏ယိုအားလုံးအတူတူဖြစ်လိုလျှင်, သင့်ပထမ ဦး ဆုံးယိုပိုက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကျော်ရွှေ့နှင့်အတူတူပင်ငွေပမာဏ။ ဒီယိုအတိအကျတူညီစေရန်အချို့သောအလေ့အကျင့်ကြာပါသည်။ ခေတ်မှီဖြန်းထားသောဖြန်းယိုကိတ်မုန့်များတွင်သုံးသောဤတိကျသောယိုခြင်းများကိုကျွန်တော်မကြာခဏတွေ့ရသည်။
ဒါကြောင့်သင်သည်သင်၏ယိုကိတ်မုန့်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောချောကလက်ယိုလုပ်ပုံကိုပဲ! ဒါကမင်းရဲ့ချောကလက်ယိုကြောက်ရွံ့မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးမင်းရဲ့နောက်ယောင်ကိတ်မုန့်ကစုစုပေါင်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချောကလက်ယိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ ဦး ။
အမှောင်၊ နို့သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ချောကလက်ဖြစ်စေပြည့်စုံသောချောကလက်ယိုစေပုံ။ ဒါဟာအားလုံးမှန်ကန်သောအချိုးအစားနှင့်အပူချိန်တွေအကြောင်းပါပဲ။ ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ၁၃၇kcal
▢၆ oz (၁၇၀.၁ ဆ) ချောကလက်တစ်ဝက် သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ချောကလက်
▢၄ oz (၁၁၃.၄ ဆ) မိုးသည်းထန်စွာကြာပွတ်မုန့်
ရုံရေနွေးငွေ့နှင့်ချောကလက်ကျော်သွန်းလောင်းသည်အထိအပူမုန့်။ ၅ မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့အထိချော့မော့ပါစေ။ သင့်ရဲ့အေးစက်တဲ့ကိတ်မုန့်ကိုမထည့်မီထိနွေးထွေးသောအထိအေးအောင်ထားပါ။
ကိတ်မုန့်အလှဆင် tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
သင်ခြစ်ရာကနေ fondant စေပါဘူး
အဘယ်အရာကိုဖန်ဆင်း fondant icing ကဘာလဲ